KUNCONYWE AMA-GAY NAMA LESBIAN NGOKUTHANDA IMPILO – Sivubela intuthuko Newspaper
USIBUSISO Makhathini we-Orama Pop Inn Health Clinic nesinye isisebenzi bekhombisa ngezinye zezinsiza kusebenza zabo.
INHLABAMKHOSI yabangama-gay nama-lesbian KwaZulu-Natal yokuqinisa ekusebenziseni imishanguzo yokuthithibalisa igciwane lesandulela ngculazi ne-pre-exposure prophylaxis (PrEP) ukuzigcina bephilile njengoba izwe lisagubuzelwe wubhubhane lwecoronavirus edala iCOVID-19.
Bacelwe nangokuqikelela ukuthi ngaphambi kokuzimbandakanya nocansi othandweni lwabo mabasazi isimo sempilo yabo ngokuthi bahambele izikhungo zezempilo bahlolwe ukuthi kabanazo yini izifo kungaba ngezithathelana ngokocansi nesandulela ngculazi.
USibusiso Makhathini ongumqondisi we-Oram Pop Inn Health Clinic eMgungundlovu uthi uthando analo ngokubona abantu bephilile lumenze wasungula isikhungo esigxile kakhulu kwabathandana nobulili obufanayo esesiphenduke ikhaya labo njengoba ethi bathutheleka ngobuningi babo kusona bezohlolelwa izifo ezinhlobonhlobo emizimbeni yabo.
USibusiso ekhuluma ngesikhungo sabo esinezizinda ezimbili esiseMgungundlovu naseThekwini uthe sesiphenduke umpheme wama-gay nama-lesbian kulezi zifunda ezinkulu KwaZulu-Natal. “Siyi-NGO kodwa umsebenzi esiwenzayo uyasimangalisa nathi ngoba sasingalindele ukuthi singaba nomthamo omkhulu kangaka wabantu abahambela isikhungo sethu. Abantu abeza kakhulu esikhungweni sethu ngabathandana nobulili obufanayo. Size saphoqeleka ukuba masibe nezigcawu lapho befundiswa khona ngezindlela zokwenza ucansi oluphephile ikakhulukazi owesilisa uma elwenza nomunye wesilisa. Okuyikhona esikuqikelela kakhulu ngukuthi umuntu kumele asazi isimo sakhe sempilo ngaphambi kokuba sebudlelwaneni bezothando,” usho kanje.
Eqhubeka uSibusiso uhlabe abantu abangayilandi imishanguzo yabo yokuthithibalisa igciwane lesandulela ngculazi selokhu kwamiswa ukusebenza kwezwe abaye babone ujenge lwabantu abeze emitholampilo bese beyajika bebuyela emakhaya. “Sithole ukuthi laba abangayilandi imishanguzo yabo bathi basaba ukutheleleka nge-corona njengoba kuthiwa itholwa kalula ngabanezifo ezingamahlala khona. Siyakugxeka ukungasetshenziswa kwama-ARV ngalesi sikhathi ngoba kucindezela umnyango wezempilo uma umuntu esegula,” ubeke kanje.
USibusiso ukhale ngokubheduka kweCOVID-19 ethi ibathikamezile abantu abaningi ikakhulukazi abaphila ngemishanguzo yamahlalakhona iningi labo elizisebenzayo. “Sisiza kakhulu abantu abazizamelayo njengoba iningi labo ngelinama-salon. Ukuvalwa kwezwe neminye imisebenzi kuphazamise abantu ngoba bazithole benengcindezi yokulanda imishanguzo yabo beyoyifaka eziswini ezingenalutho. Siyajabula ngokuxegiswa kweminye imibandela yeCOVID-19 ukuthi abantu sebezobuyela kancane esimweni sabo esejwayelekile,” uphethe kanje.